सेलिब्रेटीको सन्देश कोरोना भाइरसबाट जोगिन घरमै सुरक्षित बसौं
नेपाल लाइभ बुधबार, चैत १२, २०७६, १७:३०
काठमाडौं- कलाकारहरुले कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि घरमा बस्न सुझाव दिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा भिडियो राख्दै सबैलाई लकडाउनको पालना गर्दै घरमा शान्त बस्न आग्रह गरेका छन्। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण घरमै रहेका उनीहरुले यस्तो सन्देश दिएका हुन्।
राजेश हमाल,रेखा थापा, प्रदिप खड्का र नम्रता सापकोटाले यस्तो सन्देश आफ्नो इन्स्टाग्रामा सेयर गरेका छन्।
धेरै वर्ष पहिले एक जना भिक्षुले मलाई भन्नुभएको थियो। मानिस ठूलो समस्यामा परेको समयमा संयमता गुमाउनु हुँदैन। शान्त भएर परिस्थितिको सामान गर्छ। कोरोना भाइरसले पनि यसैको माग गरेको छ। सुरक्षित बसौं र शान्त बसौं।
A post shared by Rajesh Hamal (@hamalrajesh) on Mar 22, 2020 at 7:22am PDT
खोक्दा , साबुन पानीले हात धौऔं। भिडभाडमा नजाऔं। ज्वरो आएमा खोकी लागेका स्वास्थ्य केन्द्रमा जाऔं। हात नमिलाउँ र अंकमाल नगरौं
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट सुरक्षित रहन सबैले ध्यान दिनु पर्ने कुराहरू ? Take care ? @undpnepal @unicefnepal @unfpanepal @undp #besafe #corona #rekhathapa
A post shared by Rekha Thapa, Actor/Director (@rekha.thapa) on Mar 21, 2020 at 9:15am PDT
यो भाइरसबाट हामी सबै सजग हुनु जरुरी छ। यो भाइरसको उपचार भनेको नै घरमै बस्नु हो। जनजिवनमा जुन असर परेको छ यसबाट सजग हुनैपर्छ। लकडाउनलाई साथ दिँदै घरमै बसौं र सुरक्षित रहौं।
A post shared by Pradeep Khadka (@pradeepkhadkaofficial) on Mar 23, 2020 at 11:27pm PDT
घरमा हुनुहुन्छ होला। सुरक्षित हुनुहोला। कुकुर र गाईहरु शहरमा छन्‚ उनीहरुलाई कसले खान दिन्छ होला। मलाई यही कुरा लागिरहेको छ। घरमा पाकेको कुरा सडकमा भएका जनावरलाई पनि दिऔं। माक्स लगाऔं र घरमा बसौं।
Don’t forget to give some food and water to street animals ? #saveanimals #saveworld #namratasapkota
A post shared by Namrata Sapkota (@iamnamratasapkota) on Mar 22, 2020 at 5:32am PDT
सटकट खबर [२०७७ फागुन १८]
प्रधामन्त्रीले अरू कसैमाथि हमला गराउन आफूलाई सुरक्षा खतरा छ भने: भीम रावल
अमेरिकामा कोरोना महामारीको चौथो चरण थप जोखिमपूर्ण हुने चेतावनी
अमेरिकामा कोरोना महामारीको चौथो चरण थप जोखिमपूर्ण हुने चेतावनी अमेरिकाका स्वास्थ्य अधिकारीले कोरोना भाइरस महामारीको चौथो चरणमा थप जोखिमपूर्ण हुने चेतावनी दिएका छन्। सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एण्ड... मंगलबार, फागुन १८, २०७७
चीनलाई मलद्वारबाट कोरोनाको स्वाब लिने कार्य बन्द गर्न जापानकाे अनुरोध जापानले मलद्वारबाट कोरोनाको स्वाब ‘एनल स्वाब’ लिने कार्य बन्द गर्न चीनलाई अनुरोध गरेको छ। उसले आफ्ना देशका नागरिक चीन प्रवेश गरेमा म... मंगलबार, फागुन १८, २०७७